နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ ရခိုင်မှာ ခြိမ်းခြောက်ခံရ | ဧရာဝတီ
ရန်ပိုင်| November 6, 2012 | Hits:5,293
7 | | MSF အဖွဲ့သည် ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုသမှုများကို အခမဲ့ ပေးနေသော INGO အဖွဲ့ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – MSF)
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသည့် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ (MSF) ကို ဒေသခံတချို့က ခြိမ်းခြောက်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများ ရွှေ့ဆိုင်းထားရသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့က ပိုစတာများနှင့် လက်ကမ်းစာရွက်များ ဝေငှကာ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများကို ခြိမ်း ခြောက်နေကြောင်း၊ ဒေသခံဝန်ထမ်းများမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်းသို့ သွားရောက်ပြီး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခအတွင်းက ဒဏ်ရာရသူများကို သွားရောက်ကုသခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
MSF အဖွဲ့၏ မန်နေဂျာ ဂျိုးဗယ်လီဗျူး က“တဘက်နဲ့ တဘက် ဒီလောက်ရန်စောင်နေတာ တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျနော် တို့ ဆေးဝါး အထောက်အပံပေးတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဖူး ဆိုတာတော့ နားလည်စေချင်တယ်”ဟု ဆိုကြောင်း New York Times သတင်းစာက ရေးသားသည်။
ယခုအခါ ဒုက္ခသည်စခန်းများ၌ ကလေးအများစုမှာ အဟာရချို့တဲ့နေပြီး၊ ငှက်ဖျားရောဂါများလည်း ဖြစ်ပွားမှုများပြားနေသည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
MSF အဖွဲ့သည် မြန်မာအစိုးရ၊ အခြား ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးနေသော အဖွဲ့များနှင့်အတူ ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုသမှုများကို အခမဲ့ ပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုး များနှင့် မူစလင်ဘာသာ ၀င်များအကြား တဖက်နှင့် တဖက် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကာ တင်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူ မသီတာထွေးအား လူ ၃ ဦးက အဓမ္မကျင့်ပြီး ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ်မှုမှ စတင်ခဲ့ကာ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
ပထမအကြိမ် အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားသည့် ဇွန်လ ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးသူ ၅၀ ဦး၊ ထိခိုက်ဒဏ် ရာရသူ ၅၄ဦး၊ အဆောက် အအုံ ၂၂၃၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထိုနောက် ဒုတိယအကြိမ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ပဋိပက္ခများ တကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာသည့်အတွက် သေဆုံးသူ ၈၉ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၁၃၆ ဦး၊ နေအိမ် ၅၃၅၁ လုံး မီးလောင်ခဲ့ပြီးနောက် လူဦးရေ ၃၂၂၃၁ ဦး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
ပဋိပက္ခများ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည့်အတွက် ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်လျက် ရှိသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းသောကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ္ခများ ဖြစ်ရဟု ဦးရွှေမန်းပြော
စစ်တွေတွင် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့၍ အမျိုးသမီးတဦး အဖမ်းခံရ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment winko November 6, 2012 - 8:11 pm	AZG က လူတွေက တစ်ဘက်က အကူအညီတွေပေးနေသလို တစ်ဘက်က လူလိမ်တွေပါ။ အကူအညီတော့မပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့ စာရင်တွေဘာဖြစ်လို့ တော်တော်ကြီးကိုလိမ်ကြတာလဲ ကျွန်တော် AZG က ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူခရီးသွားဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် အေဒီတုန်းက UNHCR က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ ကျွန်တော် ကျောင်းမှာလာပြီးစာရင်းလုပ်ကြပါတယ် အကုန်လုံးအလိမ်တွေ ဆေးဝါးတွေကို သွားပေးတာကနည်းနည်း လိမ်တာကများများ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ရွာတွေမှာ ဥက္ကဌတွေနဲ့ကိုပေါင်းပြီးလိမ်ကြတယ် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တာကနည်းနည်း ကျန်တာအကုန်အလိမ်စာရင်တွေလုပ်ပြီးတင်ကြတယ်။ တချို့ အမှန်အကန်လုပ်တဲ့လူကတော်တော်နည်းပါတယ်။
Reply	mr TM November 6, 2012 - 8:45 pm	သမတကြီးခင်ဗျား ရခိုင်ပြည်ကိုစစ်တပ်ကထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆေးကုသ ပေးနေတဲ့ MSF အဖွဲ့ကိုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရအောင်ပိတ်ပင်နေတဲ့ရခိုင်တွေကိုဘာကြောင့်မတားဆီးနိုင်ပါသလဲခင် ဗျား။ရခိုင်တွေက OIC ကိုလဲပိတ်တယ်၊ AZG ကိုလဲပိတ်တယ် MSF ကိုလဲပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုစားဝတ်နေရေးနဲ့ဆေးဝါးကုသရေးကိုအစိုးရကလဲမကူညီ နိုင်ဘူးအပြင်ကလာရောက်ကူညီနေသူတွေကိုလဲပိတ်ပင်နေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသယ်စခန်းမှာ ပိတ်လှောင်ထားပြီးအမျိုးတံုးသတ်ဖြတ်နေတာလား?နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေပါလီ မန်အတွင်းမှာဒစ်ကိုကနေကြသလား?ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမဲ့တာဝန်မရှိ တော့ဘူးလား။ရခိုင်တွေဒီလောက်မိုက်ရိုင်းယုတ်မာနေတာကိုဘယ်သူမှအရေးယူမဲ့သူမရှိ တော့ဘူလား။ဗုဒ္ဒဘာသာနာမယ်ခံပြီးမိုက်ရိုင်းနေတဲ့ရခိုင်တွေကိုဗုဒ္ဒဘာသာရဟန်းတော် များအနေနဲ့ဆုံးမသင့်ပါပြီလို့ထင်မြင်ပါတယ်၊လူ့အခွင့်ရေးကိုပိတ်ပင်ရင်စော်ကားရင်အော်မှာ ဘဲဆိုတဲ့သူတွေဘယ်ရောက်ကြကုန်ပြီလဲ။သေတဲ့သူတွေလဲသေကုန်ကြပြီကျန်နေသေးတဲ့သူ တွေကိုကယ်ကြပါ၊မေတ္တာတရားထားကြပါ၊ဘေးရန်ကင်းရှင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
Reply	Wrongya November 11, 2012 - 8:02 am	Who said they are citizen of Myanmar?You should talk to Bangladesh　PM (Sheikh Hasina).　Not to U Thein Sein. Rakhine people have their own right .Only human right for human. Reply	pps12345 November 6, 2012 - 11:19 pm	ခြိမ်းခြောက်ခံရမှာ ပေါ့ စည်းမှ မထားတာကို
Reply	swe htwe November 6, 2012 - 11:41 pm	WE HEAR THAT INGOS SUPPORT TERRORISTS BY SOME MEANS.
Reply	mg mg November 7, 2012 - 10:21 am	လူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိဘဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှကန့်ကွက်ကြမှာ
Reply	aaa November 7, 2012 - 10:38 am	ဘယ်သူမပြုမိမိအမှု ဆိုသလိုပါဘဲ။ နဂိုကတည်းကဒီလူတွေမျှမျှတတလုပ်ခဲ့ရင် ရခိုင်တွေကဒီလိုဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
Reply	ဂျူလိုင် ရဲရင့် November 7, 2012 - 10:52 am	မောင်ရဲကြီးနဲ့အပေါင်းအပါများ
မင်းတို့လိုကောင်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာဘဲ အော်ရဲတာမဟုတ်လား။
သူခိုးလူဟစ် ၊ လူမိုက်အားပေး ၊ အဆိပ်ပင်ရေလောင်း ဆိုတာ အောက်တန်းစားလုပ်ရပ်ပါ။
မင်းတို့တစ်တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျမှုဟာ မင်းတို့အပေါ် သိပ်မကြာခင် ပြန်အကျိုးပေးတော့မှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ ရတဲ့နောင်တ သုံးစားမရတော့ဘူး ဆိုတာ ကြိုတင်သိထားစေလိုတယ်။ လူသားပေါင်းမြောက်များစွာထဲ အငြိုးတရား သွတ်သွင်းပြီး အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားစေတဲ့ လက်သည်တရားခံတွေဟာ ဒီဘ၀ရော နောင်ဘ၀မှာပါ မငြိမ်းချမ်းဘူး၊ ပြေးလည်း မလွတ်ဘူးဆိုတာ ……. ယုံ !
Reply	Mg Ye November 11, 2012 - 8:18 am	haha,now you are online too.tar tar kyaut kyaut.
Reply	zawlinn November 7, 2012 - 12:11 pm	အားလုံးကတော့ ကောင်းတာတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ….အကောင်းနဲနေတာနော်..၀ိုင်းဝန်း ကူညီပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ…ရိုဟင်ဂျာကိုတော့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး..နဲနဲနေရာပေးရင်…တဖြေးဖြေးဝါးမျိုသွားနိုင်တယ်…တခြားနိုင်ငံတွေမှာ သာဓက တွေအများကြီးနော်…(ဥပမာ..အိန္ဒိယ..ဗုဒ္ဓဘာသာ….ယခု မူစလင်တွေများနေပြီ..)လူမျိုး…ဘာသာ ပျက်သွားနိုင်တယ်…အားလုံးကို(ရိုဟင်ဂျာ)နေရပ်ပြန်ပို့သင့်ပါတယ်။။။
Reply	အောင်ဇေယ November 7, 2012 - 12:15 pm	ဆရာဝန်တွေ. သူနာပြုတွေကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါ
Reply	ရခိုင်ဝံသနု November 7, 2012 - 1:54 pm	ဘာအဖွဲ့မှအဝင်မခံဘူး
Reply	ဗဒင် November 7, 2012 - 2:13 pm	သမတကြီးလည်းရှိ့တယ်
Reply	Ohmar November 9, 2012 - 3:14 pm	comment တော့မေ၇းတက်ဘူး…ကိုဗဒင်၇ဲ့ comment ကိုတော့ အ၇မ်းထောက်ခံတယ်…ဘာကြောင့် မင်းမဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်နေ၇တာလည်းလို့..တကယ်လို့ ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အကြမ်းဖတ်မယ်ဆို၇င် ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေ၇ှင်းမလည်း…ဒီပြည်နယ်လေးလောက်တောင် ငြိမ်းချမ်းအောင် မဖြေ၇ှင်းနိုင်၇င်… ညဏ်မမှီပါ…မြန်မာပြည် မှ လူကြီး လူကောင်းများ တော်လွန်းတဲ့ ဦးနောက်ကို။
Reply	true talker November 7, 2012 - 2:43 pm	Now,you know about these Extremely Racist “Mway Pway”,minds. Very rude people with very low minded.Why they did not know these persons are helping to the needed patients.Why they insults and threatened ? Well ,I am not Kalar, nor Yakhine,but, I know that these people are very hard to make friend or to deal.
Reply	=== November 7, 2012 - 4:48 pm	ကုလသမ္မဂ၊ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနဲ့ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်တွေကိုတောင် ဒုက္ခပေးတတ်တာ အာဖဂန်နစ္စတန်က တာလီဘန်တွေနဲ့ ဆိုမာလီယာက မွတ်ဆလင်စစ်သွေးကြွတွေပဲ။
ခုတော့ တို့ပြည်တို့ရွာမှာ ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း မွတ်ဆလင်စစ်သွေးကြွတွေထက် မလျော့ဘူးလို့ ပြချင်ကြတာလား။
လုပ်ချင်တာတွေအတွက် ကိုယ့်ဘာသာ လူမျိုးနဲ့ ဒေသတွေကို ခုတုံးမလုပ်ကြပါနဲ့။
Reply	mr TM November 7, 2012 - 9:42 pm	OIC ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုမှရောက်တာပါ၊လုပ်ငန်းတောင်မစရသေးဘူးခွဲခြားမှုရှိတယ်ဆိုပြီးအ ပိတ်ခံ ရတာပါမွစ္စလင်အဖွဲ့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်။အကြောင်အရာတခုနဲသာဓကပြခြင်ရင်အရင်သိအောင် ကြိုးစားပါ…..အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး၊ဟိန္ဒူနဲ့မွစ္စလင်နိုင်ငံပါခရစ်ယာန်ကတတိ ယပါဗုဒ္ဒကလူနဲစုဘဲရှိတာပါ။ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နေရပ်ပြောပြပါပြန်ပို့ဘို့။AZG ကိုလူလိမ်တွေလို့မပြောခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ကိုဗဒင်ရဲ့ Comment ကိုထောက်ခံပါတယ်၊
Reply	Kyaw Hlwan Moe November 9, 2012 - 3:42 am	Biased Writing!
Reply	မောင်ကျောက်ခဲ November 9, 2012 - 4:04 pm	ရခိုင် အရေး ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ပေရှည်နေရသလဲ?လူမှု့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တွေ၊ နိုင်ငံတကာ အထောက်ပံ့တွေ အခုလို အဆက်သွယ်ပြတ်၊ ဘာမှလုပ်လို့ မရပြဲ့ပည်သူတွေဒုက္ခသည်ဘ၀ရောက်နေကြပြီးအခက်တွေံ့နေတာတွေဟာ၊ ကျွန်တော်တို့ အမြင်မှာတော့ အဓိက အကြောင်းတရားကတော့..အစိုးရပဲ။အစိုး၇၇ဲ့ကိုင်တွယ်မှု့ ညံ့ဖျင်းလွန်းအားကြီးလို့။ပြသနာတခု၇ဲ့အတိမ်အနက်ကိုလဲမသိ။စနစ်တကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဘာ့ကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့ တကယ်သိတကယ်တတ်တဲ့ လူတွေက မြောင်းထဲရောက်နေကြရတာ၊ဘာမှမတတ်တဲ့ လူတွေကရာထူးကိုပလူပျံနေတာ။သူတို့ သိတာ လူတစုကောင်းစားဖို့ ပဲ သိတာ၊ပြည်သူဆို တ၇ိ်စ္တာန်သာသာပဲသဘောထားတဲ့သူတွေ။အဲ့တော့ ပြသနာဖြစ်ပြီဆိုရင် သေနတ်မောင်းဆွဲဖို့ ပဲသိတဲ့လူတွေကြီးပဲ ဘယ်လိုဒီပြသနာကအဖြေမှန်ထွတ်လာမှာလဲ။သမ္မတ၇ှိတာမှန်တယ်၊ ပြည်သူပေါ်လဲကောင်း၇ှာပါတယ်။လွှတ်တော်၇ှိတာမှန်တယ်၊လေကန်ပြီးငြင်ခုံတာပဲ၇ှိတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ စစ်တပ်၇ှိတာမှန်တယ် အထက်ကပစ်ဆိုပစ်ဖို့ပဲသိတယ်…။သမ္မတကြီးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အပိုင်းကလူတွေကစည်းချက်ညီညီမှ မလုပ်နိုင်တာ။ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ပြည်သူအတွက်က ၁ကျပ် သူ တို့ အတွက်က ၁၀၀။လူတစု ကောင်းစားရေး ဆိုတဲ့ အကျင့် ဟောင်းတွေကလဲ မဖျောက်နိုင်။ လုပ်နေတာတွေကလဲ ဆင်သရေကို ဆိတ်သရေနဲ့ မလုံမလဲ ဖုံးဖိပြီး အတိတ်မှာ မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ကြတော့ ပြည်သူ့ ကိုလန့်နေကြတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူ့ အရေးဟာ အမြဲတမ်းဘေးမှာပါပဲ…ပြည်သူချမ်းသာမှာ ကောင်းစားမှာအရမ်းစိုးတာ။ပြည်သူနလန်မထူမှ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုခေါင်းပြန်မော့လို့ ရမှာ။လွှတ်တော်ထဲလဲ နေတိုင်းဆွေးနွေးနေကြတာပဲ ဒါပေမယ့်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ပြည်သူပိုက်ဆံ နဲ့ထမင်းထိုင်စားပြီး ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာကုန်တာပဲအဖက်တင်တယ်။ လွှတ်တော်အတွင်းမှာတောင် အချင်းချင်းခွက်ခုတ်နေကြတာ ဘယ်ကလာ ပြည်သူ့ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ပေးနိုင်မှာလဲ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ပြည်သူဘက်ကတကယ်ရပ်မယ့်သူက ဘယ်နှယောက်မှမ၇ှိဘူး။လည်ပင်းကြိုးကွင်းရောက်မှာစိုးပြီးပေကန်ပြီး ကန့် လန့် တိုက်နေကြတဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကအပြည့်။ အဲ့ဒီတော့အစိုးရက ရခိုင်အရေးကိုလုပ်တော့လုပ်ပေးလိမ့်မယ် ဘယ်တော့လဲတော့မသိ။လွှတ်တော်မှာလဲဆွေနွေးနေတယ် ဘယ်လိုလဲတော့မသိ။ ပြည်သူကလဲစိုး၇ိမ်နေကြတယ် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။”ဘာ”တွေထပ်ပြီးဘာမှန်းကိုမသေချာတဲ့အနာဂါတ်မှာ ကုလားတွေလဲကြည့်နေကြည့်ထိုင်ကြ။ရခိုင်တွေလဲကြည့်နေကြည့်ထိုင်ကြဖို့ ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ။်ဖြစ်လာရင်တော့ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပြီးကိုယ့်ကျင်းကိုယ်တူးဖို့ ပဲ၇ှိတယ် အထက်ကိုဘာမှမျှော်မနေကြနဲ့ ။၂ဖက် သတ်ဖြတ်နေကြလ့ို့ ချက်ချင်းကူမယ့်သူလာမယ်မထင်ကြနဲ့ ၊ ချက်ချင်း အမြတ်ထုတ်မယ့်အဖွဲ့တွေပဲလာလိမ့်မယ်။နိုင်ငံေ၇းမှာလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစားမနာလို၊ငါစားမနာလိုနဲ့အပြီးသတ်ကြတော့မှ ကြားခွေး ၀င်စားမှာလဲ သတိ၇ှိကြပါဗျာ။
Reply	မောင်ကျောက်ခဲ November 9, 2012 - 4:22 pm	mr Tm ခင်ဗျားပြောသလို ရခိုင်ယုတ်မာတယ်ဆိုတာတော့ အရမ်းများသွားပြီ။တကယ်တော့ ဘင်္ဂလီတွေကသာ ၀မ၇ှိပဲ ၀ိ လုပ်ပြီး စမာန် ထ နေကြတာ ။ တကယ်လို့ ရခိုင်သာ ယုတ်မာရင် ဘင်္ဂလီကုလားတွေ အခုလောက်ဆို အရိုးဆွေးနေလောက်ပြီ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစု ကို ထိပါးလာရင် ပြန်ပြီးတုန့် ပြန်မှာပဲ ခင်ဗျားသာ ရခိုင် နေရာမှာဆိုလဲ ဒီလိုပဲဖြစ်မှာ။ ဒါပေမယ့် ကုလားက စလို့ရခိုင်က ပြန်တုန့့် ပြန်တယ်။ဒါကို ယုတ်မာတယ်ပြောရင် ကိုယ့်မျက်ချီး ကိုမမြင်တဲ့ ခင်ဗျားလဲ ဘင်္ဂလီ ဖြစ်နေပြီဆိုတာမှန်းလို့ ရတယ်။ သူများကို ဝေဖန်ထောက်ပြရင် သူတပါးအတွက် စကားအရနဲ့တောင် တဖတ်သတ်ဆန်ဆန် နစ်နာအောင်မပြောရဘူးကွယ့်။မှတ်ထားနော်..ဒါပေမယ့် ငယ်၇ွယ်သူဆိုတော့လဲ ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။
Reply	သေချာကြည့် November 9, 2012 - 9:59 pm	AZG ရဲ့ သရုပ်သကန် အမှန် ကို ဆန်းစစ် အံထုတ်ခြင်း (အပိုင်း တစ်)
by Coral Arakan News Agency on Monday, October 22, 2012 at 12:47am ·
By Kyaw Zaw Oo ၊ စစ်တွေ ၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ in-depth ]
ကိုငြိမ်းမောင်* တစ်ယောက် အသစ်စက်စက် ဖွင့်တော့မယ့် AZG ရဲ့ “ရှုခင်းသာ”ဆေးခန်းကို လာဖို့ ဖိတ်စာရထားတဲ့အတိုင်း၊ မနက် ကိုးနာရီလောက်မှာ ဆေးခန်းကို ရောက်လာတဲ့အခါ မနေ့ကအထိ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ ဖွင့်ပွဲအရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရင်း စည်ကားနေခဲ့တဲ့ နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ကလေးဟာ သော့ခတ်ပိတ်လျက်သား ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ တိုက်ရဲ့ဝင်ဝအုတ်တိုင်မှာ အေသရီးဆိုဒ် စာရွက် တစ်ရွက်ကပ်ထားတယ်။ စာရွက်မှာ ရေးထားတာက “ဘက်လိုက်မှုရှိ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိ၊ ကုလား(ဘင်္ဂါလီ)အရေး ဆောင်ရွက်ပေးသော AZG (MSF) အား အလိုမရှိ” လို့ ရေးထားတယ်။
နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ လူလေးငါးခြောက်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရောက်လာပြီး တိုက်ရှေ့မှာ ရပ်နေတယ်။ ခဏနေတော့ အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အရှိုရှိုရောက်လာကြတာ လူအယောက်နှစ်ဆယ် သုံးဆယ် လောက်ဖြစ်လာတယ်။ လူစုလူဝေးကြီးထွားလာပြီး နောက်ထပ် ငါးမိနစ်လောက် အကြာမှာ AZG ကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဗီနိုင်းတွေကို ဖြန့်ကိုင်ပြီး ဓါတ်ပုံ အရိုက်ခံကြတယ်။ ပရိတ်သတ်က လက်ခုပ် ၀ိုင်းတီးကြပြီးတော့ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်းပဲ လူစုခွဲလိုက်ကြတယ်။
ဆန္ဒပြကြမယ့်နေရာကို အစောဆုံးရောက်လာတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက်ကို သတင်းဌာနတစ်ခုက ကင်မရာကို ဒေါက်တိုင်ပေါ်တင်ပြီး အကျအန အင်တာဗျူး နေတာကို ကိုငြိမ်းမောင်တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ တွေးစရာတွေ၊ စိတ်ပူစရာတွေ အပုံအပင်နဲ့ ကိုငြိမ်းမောင်တစ်ယောက် သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ရုံးရှိရာ ခြံလေးကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
ကိုငြိမ်းမောင်တို့ အဖွဲ့ကို Utopia လို့ခေါ်ပါတယ်။ Utopia ဟာ စစ်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က PLHIV (People Living with HIV ၊၀ါ၊ HIV ဝေဒနာရှင်) တွေကို တတ်အားသမျှ အကူအညီတွေပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကလေးဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းမောင်ကိုယ်တိုင် ဝေဒနာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲအပြီး မဖွင့်လိုက်ရတဲ့ AZG ဆေးခန်းရှေ့မှာ အင်တာဗျူးနေတဲ့ လူကတော့ ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သာမန်စစ်တွေမြို့သားတစ်ဦး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ activist တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တော့ ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်ခင်တစ်ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်က ကိုငြိမ်းမောင်ကို တွေ့ချင်တဲ့ အတွက် ကြားလူတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပေးပါသေးတယ်။ ကိုငြိမ်းမောင် အနေနဲ့ တကယ် မအားမလပ်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်နဲ့ အဲသည်နေ့က မတွေ့ လိုက် ရပါဘူး။ AZG ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ကိစ္စနဲ့ ကိုငြိမ်းမောင်တစ်ယောက် မအားမလပ် ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆန္ဒပြကြတာပြီးသွားလို့ မွန်းလွဲ တစ်နာရီလောက်မှာ ကိုငြိမ်းမောင်က ကျွန်တော်ဆီကို ဖုံးဆက်ပါတယ်။ မနေ့က ဆောရီးပါဗျာ တဲ့၊ ဒီနေ့အားသလား၊ အခုအားသလားတဲ့။ သူချိန်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ Utopia ရုံးခြံလေးဆီကို ကျွန်တော် ချက်ချင်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လိုက်သွားပါတယ်။
အဲ . . . ထူးဆန်းတာတစ်ခုက၊ AZG ဆေးခန်းကပေးတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ အသက်ဆက် နေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို AZG ဆေးခန်းမဖွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာပါတဲ့ လူတစ်ယောက်က လာတွေ့ရတာ သိပ်ပြီးကြောင်တက်တက် ဖြစ်မနေပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AZG ကို ရခိုင်လူထုက တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဆန့်ကျင်တော့မှာကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် စလုံး သိနေပြီးသား ဖြစ်ကြလို့ပါပဲ။
“ဒါကတော့ဗျာ . . . ၊ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးအရေးကို ကျွန်တော်တို့ PLHIV အယောက် သုံးရာလောက်အရေးနဲ့ ဘယ်လိုမှ လဲလို့မှ မရတာ။ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်” လို့ သူက ဆိုရှာတယ်။
သူတို့ Utopia အဖွဲ့အကြောင်းကို မေးနေစဉ်မှာပဲ လူနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ မယောင်မလယ် လုပ်နေရင်း၊ ခဏနေတော့ ခြံထဲကို ၀င်လာတယ်။ သူတို့ကပြောတယ်။ ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်အတွက် ART လိုနေတဲ့အတွက် ဆေးဖြန့်ပေးတဲ့ outreach worker ၀န်ထမ်းကို ဖုံးဆက်တာ ဖုံးပိတ်ထားတယ် တဲ့၊ ဘယ်လို
“အေးဗျာ၊ ဆေးတွေက အခုပိတ်ထားတဲ့ ဆေးခန်းထဲမှာဗျ။ နားလည်ကျွမ်းကျင်သူ ၀န်ထမ်းက ထုတ်ပေးမှ ရမယ်” လို့ ကိုငြိမ်းမောင်က ရှင်းပြတယ်။
စောစောပိုင်းက MSM (Men who have Sex with Men) နှစ်ယောက်ဟာ AZG က နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီး ဒေါက်တာ အယ်လဆာကို သွားတွေ့ပြီး ဆေးထုတ်ပေးဖို့ သွားတောင်းသေးတယ်တဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ရှေ့က ကိုလူစိမ်း နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ပြောပြတယ်။ အဲသည် နိုင်ငံခြားသူ ဒေါက်တာမမက ပြောလိုက် တယ်တဲ့။ ငါရော အခြားဒေသခံဝန်ထမ်းတွေပါ ဆေးခန်းကိုသွားပြီး ဆေးမထုတ် ပေးရဲဘူး၊ အသက်အန္တရယ်ရောက်မှာကို စိုးရိမ်တယ်တဲ့၊ နင်တို့ဆေးလိုချင်ရင် ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေဆီက သွားတောင်းပါ တဲ့၊ ငါတို့တော့ မပေး နိုင်ဘူး လို့ ပြောတယ်တဲ့။
ကိုယ်မဲမရတဲ့ ရပ်ကွက်ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ်တစ်ယောက်က မလိုတမာလေသံနဲ့ ပြောပုံနဲ့ တူလိုက်တာ လို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ ကိုလူစိမ်းနှစ်ယောက်က မှတ်ချက်တစ်ခုပေးတယ်။ AZG က ဒီလောက်တောင် ဘင်္ဂါလီဘက်ကို လိုက်နေတာ၊ ဒီလိုဖြစ်လာမှာကို တားလို့မရဘူးဗျ လို့ သူတို့က ဆိုတယ်။
အဲသည် လူနှစ်ယောက်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကျမှ ကိုငြိမ်းမောင်က ကျွန်တော့်ကို လေးနက် စိုးရိမ်တဲ့ မျက်နှာနဲ့မေးတယ်။ အေးဗျာ၊ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိဘူး၊ ရန်ကုန်မှာ လိုလည်း ဆေးဆိုင်တွေက ၀ယ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုငြိမ်းမောင်က ညဉ်းတော့၊ ကျွန်တော့် အသိတစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးကြည့်ရတယ်။
လောလောဆယ်ကတော့ စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက ကာလသားရောဂါဌာနကို သွားပါတဲ့။ ART ဆေးတွေကိုတော့ အထွေထွေရောဂါကု သမားတော်ကြီးက ကိုင်ထား တယ်တဲ့။ သူတို့ရဲ့ စနစ် ပရိုဆီဂျာ လေးကို ဖြတ်သန်းပြီးရင် ဆေးရလိမ့်မယ် လို့ထင်ပါ တယ်တဲ့။ အဖြေ တစ်ခု ထွက်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါက လတ်တလောဖြေရှင်းဖို့ ထွက်ပေါက်တစ်သွယ်လို့ပဲ ယူဆရတယ်။ AZG က လုပ်နေခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းနေရာကို ၀င်ယူဖို့ ၊ တာဝန်ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ဖို့ ၊ AZG လိုပဲ ရံပုံငွေကို လက်ခံယူဖို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် လိုလာလိမ့်မယ်။ စစ်တွေက ရွှေဂရုဏာဆေးခန်း လို ဆရာဝန်တွေဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတော့ဖြင့် အဲသည် စွမ်းရည်ကို တည်ဆောက်ပြီး နေရာဝင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ဒါအတွက် Pheonix တို့၊ Myanmar Positive Group (MPG) တို့၊ 3N Network တို့က AZG ရဲ့ HIV ဆေးပေးပရိုဂရမ်ကို ဆက်ခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေကများ ဒီအတွက် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးမလဲ . . . စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာကျန်သေးတယ်။ * * ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် ဂေါက်ရိုက်ကြသူများ
AZG (ခေါ်) MSF-Holland ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ၀င်လာရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဟာ သူတို့အခေါ် ရိုဟင်ဂျာ ကျွန်တော်တို့အခေါ် ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် အန္တိမ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး ၀င်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ရည်မှန်းချက်နဲ့ မြန်မာပြည် ကိုသွားစေဖို့ အလှူရှင်တွေရဲ့ ငွေအားမောင်းနှင်မှုနဲ့ ဒီကိုရောက်လာကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ MSF အပိုင်းအသီးသီးတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ကို ၀င်ရောက်လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအသေးစိတ်ကို MSF ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်မှာပဲ ရေးတင်ထားတဲ့ ဒေါက်တာ ဖီယိုနာ တယ်ရီ (Dr Fiona Terry) ရေးသားတဲ့ Myanmar. “Golfing with the Generals” ဆောင်းပါးမှာ တိတိကျကျ သရုပ်မှန်ကို သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်ရင် alibi project (မျက်နှာဖုံး ရုပ်ပြ စီမံကိန်း) အစရှိတဲ့ ထူးဆန်းသော ဝေါဟာရ အသစ်အဆန်း တွေ တွေ့ရပြီးသကာလ ရေနံငွေကို နောက်ခံပြုထားတဲ့ NGO တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတ များစွာ တိုးပွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ MSF ရဲ့ အပိုင်းခွဲ သုံးပိုင်း ဖြစ်တဲ့ MSF-France ၊ MSF-Switzerland နဲ့ MSF-Holland တို့အနက်မှာ ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိစပ်အလုပ်လုပ်တာက MSF-France အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ MSF-France ဟာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တောက်လျှောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်မလာပဲ ၁၉၈၄-ခုနှစ် လောက်ကတည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည် ထဲကို ၀င်လာဖို့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် လျှောက်ထားတဲ့အခါ အောက်ပိုင်း ဗျူရိုကရက်တွေက ထောက်ခံပေးလိုက်ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက စိစစ်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်တဲ့အခါကျတာ့၊ ထိုင်းနယ်စပ် အကူအညီပေးရေး လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုတွေ KNU နဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ကြောင့် ပယ်ချခြင်းခံရတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ MSF-Holland က (ဘင်္ဂါလီ)ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀င်ရောက်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ သတိကြီးစွာထားပြီးလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အချက် အနေနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ MSF-France နဲ့ သူတို့ကို ဆက်စပ်မမြင်မိအောင် MSF-Holland ဆိုတဲ့ သူတို့နာမည်အရင်းမသုံးပဲ သူတို့ရဲ့ ဒတ်ခ်ျဘာသာ နာမည် AZG (Artsen zonder Grenzen) ကိုခံယူပါတယ်။ MSF ကိုမသုံးပဲ AZG ဆိုတဲ့နာမည်ကို သုံးတာကြောင့် MSF အသိုက်အ၀န်း ရဲ့ မျက်ခုံး ပင့်ကြည့်မှု ကို ခံရသော်ငြားလည်း ဒီလို မျက်နှာဖုံးစွပ်လုပ်ရပ်ကြောင့် အောင်မြင်သွား ပါတယ်။ AZG လို့ပဲခေါ်ခေါ် MSF-Holland လို့ပဲ ခေါ်ခေါ် သူတို့အဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်ထဲကို အောင်အောင် မြင်မြင်ဝင်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ရုံးစိုက် အခြေချမယ့် AZG ရဲ့ ပထမဆုံး တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်တော် ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဟာ ၁၉၉၂-ခုနှစ် ဇွန်န၀ါရီလမှာ ရန်ကုန်မြို့ကို ဆိုက်ရောက်တော်မူပါတယ်။
UNICEF ရဲ့ ကမကထပြုမှုအားဖြင့် လုပ်ငန်းတွေကို စတင်ချိတ်ဆက်တယ်။ UNICEF နဲ့ အဆောက်အအုံ တစ်ခုတည်းမှာ ရုံးခန်းဖွင့်တယ်။ ကျုပ်တို့ရွာမှာ အရင်ရောက်နှင့်နေတဲ့ UNICEF ကတော့ AZG ကို ရွာကာလသားတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီး လမ်းကြောင်းရှင်း ပေးတယ် လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
AZG က အကွက်ကျကျ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းလာပုံကို ဒေါက်တာဖီအိုနာတယ်ရီ က ဒီလို ရေးထားတယ်။
AZG ရဲ့ အဓိကအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ အရေးအရာက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) တွေရဲ့အရေးဖြစ်ပေမယ့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကို AZG ကို သွားလာ ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးဖို့ကို အစိုးရက စိတ်ကူးထဲမှာတောင် ထည့်မထားတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ရန်ကုန်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ ဆေးခန်းတစ်ခန်းဖွင့်တဲ့ ခြေလှမ်းကို “မဟာဗျူဟာမြောက်” ခြေလှမ်းအနေနဲ့ စတင်လှမ်းလိုက်ပါတယ် တဲ့။
ဒါဟာ သူတို့အခေါ် “foot-in-the-door” လို့ခေါ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများနဲ့ ချစ်ကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ခြေလှမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါကမှတစ်ဆင့် အရာရှိကြီးတွေနဲ့ ဂေါက်ရိုက်တာတို့၊ အရာရှိကြီးတွေကို လက်ဆောင်ပေးတာ မိတ်ဆွေဖွဲ့တာတို့လုပ်ပြီး မိမိတို့ သွားချင်တဲ့ နေရာဆီ တဖြည်းဖြည်းရောက်အောင် သွားနိုင်မှာ မို့လို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတော့ AZG ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဟာ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက ကျောက်တူးကြတဲ့ နေရာ တစ်နေရာ(ဖားကန့်လား ဘာလားတော့မသိ)မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့အရေးကို
ပြောချင်တဲ့အတွက် ကချင်စစ်တိုင်းမှူးကို တွေ့ခွင့်တောင်းတာ တွေ့ခွင့်မရ ဖြစ်နေပါသတဲ့။ နောက်ဆုံးမတော့ မြစ်ကြီးနားဂေါက်ကလပ်ကို သွားပြီးဂေါက်ရိုက် လိုက်တာ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါလေရောတဲ့။ ဒါက သူတို့သုံးနေကျ foot-in-the-door diplomacy ။ ချဉ်းကပ်ရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာရအောင် ယူသွားတာ။
ဒါအပြင် AZG က သုံးတဲ့ နောက်ထပ်နည်းတစ်နည်းကို Medical diplomacy လို့ ခေါ်ရမယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဆေးပညာပိုင်းအရ မိမိတိုရဲ့ အသုံးတည့်မှုကို ချသုံးပြီး လိုချင်တဲ့နေရာကို ရောက်အောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ငှက်ဖျားဆေးယဉ်သွားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ AZG ဟာ ၁၉၉၅-ခုနှစ် ရခိုင် ဒေသမှာ လေ့လာမှုတစ်ရပ်လုပ်တယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးနေတဲ့ ငှက်ဖျား ဆေးပေး စနစ်ရဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာ ဆေးမတိုးဖြစ်နေပုံကို ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့အတူ AZG ရဲ့ လုပ်ရေးလုပ်ခွင် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ ဒါမျိုးကျတော့ medical diplomacy လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ရခိုင်နယ်စပ်က ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတိုအဖို့ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးရမယ့် ပင်မလူဦးရေထု (target population) ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ မမေ့တဲ့ AZG အတွက် သူတို့အရမ်းသွားချင်လှတဲ့ ရခိုင်ပြည်ကို ရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းက ၁၉၉၃ ဧပြီလမှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ပရိုဂရမ်တွေ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ AZG ဟာ စစ်တွေမြို့မှာ ရုံးဖွင့်ခွင့်ရတယ်။
ဒီလိုတစ်ရွေ့ရွေ့တိုးသွားရင်းနဲ့ နောက်ထပ် လေးနှစ်ကျော်အကြာ ၁၉၉၈-ခုနှစ် ဇွန်န၀ါရီလမှာ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ မောင်တောမြို့မှာ AZG ရုံးဖွင့်ခွင့်ရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ မဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးတွေထဲက တစ်ရပ် အောင်မြင်သွားပါတယ်။
မိမိတို့ AZG ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေအတွက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ (AZG’s primary goal of advocacy on behalf of the Rohingyas) ဆိုတဲ့ AZG အဖွဲ့သားများအတွက် မဟာခြေလှမ်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
မိမိတို့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ လက်တွေကျကျ တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းသွားပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရင်း ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ) အရေးအတွက် တစ်ဆင့်ချင်း အုတ်မြစ်ချသွားလိုတဲ့ ရန်ကုန်က AZG ရုံး အုပ်ချုပ်သူများရဲ့ ချီတက်နှုန်းကို နှေးကွေးလှတယ်ဆိုပြီး၊ ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့ ရုံးချုပ်က လူကြီးမင်းတွေက မကျနပ်နိုင်ကြတာတွေ ခဏခဏ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ AZG ရဲ့ အတွင်းလူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီလို မကျေနပ်နိုင်တာတာ အထူးသဖြင့် အလှူရှင် donors တွေ နဲ့ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးပြီးတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။
မြန်မာပြည် မောင်တောနယ်စပ်က ဘင်္ဂါလီကုလားအရေးကို ဆောင်ရွက်တာ နှေးကွေးလှတယ်ဆိုပြီး ဒေါသထွက်ရလောက်အောင် အမ်စတာဒမ် AZG လူကြီးမင်းများနဲ့ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးကြသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေများ ပါလိမ့်။
အင်္ကျံရှည် ၀တ်ရုံဖြူကြီး တကားကားနဲ့ ခေါင်းခြုံဘောင်းရစ် အကျအနနဲ့ အာရပ်ရေနံနိုင်ငံတွေက အာရပ်ကြီးတွေများလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ လွှတ်လိုက်တဲ့ ဦးဟန်ညောင်ဝေလို လူတွေလား။
ဒီလို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီဆိုတာတွေကို အသုံးချပြီး၊ လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေး ရလဒ် ထွက်လာအောင် မိမိတို့အားပေးနေတဲ့အုပ်စု အင်အားကြီး သထက်ကြီး လာအောင် ပုံဖော်လုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို အဲဒီအာရပ်ကြီးတွေလည်း သိတယ်၊ ဦးဟန်ညောင်ဝေ လည်းသိတယ်၊ AZG က လူ့အခွင့်အရေး အရေခြုံတွေ ကလည်းသိတယ်။ ကျွန်တော်လည်းသိတယ်။ ဖီအိုနာ တယ်ရီ လည်းသိတယ်။
ဒါတွေကို အတွင်းကျကျ အသေအချာ သိတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဓိကနဲ့ဘွဲ့ရပြီး MSF မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့၊ ကမ္ဘာအနှံ့က သွေးမြေကျ ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့၊ ထောက်ပံရေး အကူအညီ တွေဟာ အုပ်စုဘက်ပြိုင်မှုတွေကို သြဇာသက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို ခရေစေ့တွင်းကျ စာတတန်ပေတဖွဲ့ ရေးသားဖူးတဲ့ ဖီအိုနာ တယ်ရီ (Fiona Terry) ဖြစ်ပါတယ်။
သူ ဘာပြောသလဲ ဆိုတာကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးပါတယ်။
* * လူသားစာနာကူညီထောက်ပံ့မှု ရဲ့ နိုင်ငံရေး (politics of humanitarian aids)
NGO အရေးဟာ နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ရင် မရယ်ရင်တောင်မှ ပြုံးတုံ့တုံ့ လုပ်မိကြမယ့်သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရယ်ကြပါနဲ့။
တည့်တည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် မောင်တောမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သွေးတွေဟာ AZG တို့ ACF တို့လို NGO တွေရဲ့လက်တွေမှာ ပေစွန်းနေတယ်။ သူတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ ပေကျံနေတယ်။ သူတို့နေ့တိုင်း ညစာစားတဲ့ ပန်းကန်ပြားတွေမှာ မောင်တော နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သွေးတွေ စီးကျနေတယ်။
(၁) ရ၀မ်ဒါ။ ၁၉၉၄ နဲ့ ၁၉၉၆ အကြား ဇိုင်ယာနိုင်ငံမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ရ၀မ်ဒါ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ တကယ့် ဒုက္ခသည်အစစ်တွေ နဲ့ မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာ ပါဝင်သူတွေ ရောနှောနေခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒုက္ခသည် အယောင်ဆောင် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကပဲ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်တယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာ နေ့စဉ် ဒေါ်လာသန်းချီတဲ့ ပမာဏနဲ့ ၀င်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကို ချယ်လှယ်တယ်၊ သုံးစွဲတယ်။ အဲဒါတွေထဲကနေ တစ်လ တစ်လကို ဒေါ်လာသန်းချီပြီးခိုးတယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ လိုအပ်တဲ့ ကား၊ ယာဉ်၊ ဆက်သွယ်ရေး အစခပ်သိမ်းကို ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့မှုကွန်ရက်ကနေ အလကားရတယ်။ ဒါတွေကို သုံးစွဲ အင်အားဖြည့်တင်းပြီး မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေကို လုပ်လိုက်တာ လူပေါင်း နှစ်သိန်းကျော် သေတယ်။ ဒါ့အတွက် ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲ။
(၂) ၁၉၉၁-ခုနှစ်၊ အီရတ်ပိုင် ကာဒစ္စတန်ဒေသ။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု ဒဏ် ကို ခံစားရလို့ ကာ့ဒ်လူမျိုးတွေ တူရကီနယ်စပ်ကို အလုံးအရင်းနဲ့ ထွက်ပြေး ကြတယ်။ (တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလည်း အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ် တွေက ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲကာလအပြီးမှာ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို ပုန်ကန်ဖို့ မြှောက်ပေးတဲ့ အတိုင်း ထကြွမိလို့ ဖြစ်ရတာ။) ဒုက္ခသည်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ မိမိရဲ့မဟာမိတ် တူရကီနိုင်ငံထဲကို ၀င်လာရင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်သွားမှာအမေရိကန်က စိုးရိမ်တဲ့အတွက်၊ တစ်ဘက်မှာ ဒုက္ခသည် အဖြစ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ဖက်မှာ အီရတ်ပြည်တွင်းဘက်ကို လူတွေကို မျှားခေါ်တဲ့အနေနဲ့ အတွင်းဘက်မှာ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ပေးဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီတော့ လူတွေဟာ အန္တရယ် ကင်းရာနယ်စပ်ဖက်ကို ရောက်လာရမယ့်အစား အန္တရယ်ရှိတဲ့ ဧရိယာ နယ်နမိတ် ထဲမှာပဲ ရှိနေကြတော့တယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကို ဒီမှာ စာရင်းချနေရင် ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
တရားဝင်အားဖြင့်ပြောကြစတမ်းဆိုရင် လက်နက်ရယ် တိုက်ခိုက်ခြင်းရယ် တို့ကို လုံးဝစွန့်လွှတ်လိုက်မှသာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မှာ အဲသလိုဖြစ်မနေပါဘူး။ လက်နက်မကိုင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းအရိပ် အောက်မှာ ခိုလှုံပြီး နောက်တစ်ကြိမ် သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နိုင်အောင် ကြံစည်နေသူတွေဟာ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ရှိနေတတ် ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို လက်တွေ့ကွင်းထဲမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဖီအိုနာ တယ်ရီ က ဒီလိုလူတွေကို အမည်သစ်ပေးပါတယ်။ ဒုက္ခသည်-တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ (refugee-warriors) လို့ခေါ်တယ်။
မိမိတို့ ကူညီပေးမယ့် လူဦးရေထုအတွက် OIC လို (နိုင်ငံတကာရဲ့ အကြမ်းဖက်သမား အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကို လက်မခံတဲ့) အဖွဲ့မျိုးက မဟာဗျူဟာချမယ်။ ငွေကြေးခွဲဝေချ ထားပေးတယ်။ AZG လို ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ အဖွဲ့မျိုးက ဥရောပ တိုက်သား လူဖြူမျက်နှာဖုံးတွေဖုံးပြီး အဲသည်ပိုက်ဆံတွေကို လိုအပ်တဲ့ နေရာ အရောက် ပို့ပေးမယ်။ အဲသည်နေရာမှာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ နေထိုင်ပြီး သူလျှိုလုပ်မယ်။
AZG ဆိုတဲ့ အိမ်စာကို တွက်ချက်ကြည့်ရင် အောက်ပါတို့ကို တွေ့ရှိပါတယ်။
(၁) AZG ၀င်လာတယ် ဆိုကတည်းက သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်အကျိုးခံစားခွင့်ပေး လူဦးရေထု (target population) ဟာ (ရိုဟင်ဂျာလို့ သူတို့ခေါ်တဲ့) နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဘင်္ဂါလီတွေ သာလျှင် ဖြစ်တယ်။
(၂) AZG ရဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း အဓိကရည်မှန်းချက် (primary goal) က အဲသည် ဘင်္ဂါလီတွေ အရေးအတွက် ပြောဆိုရေးသားတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ (advocacy) အတွက်သာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် AZG ဟာ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ iNGO ဖြစ်တယ်။
(၃) ၂၀၁၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် အမတ် ခရစ္စတိုဖာ စမစ်သ်က ကွန်ဂရက်ကို တင်သွင်းတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်အပြည့်အ၀ပေးစေရေး ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို တင်သွင်းရာမှာ MSF ရဲ့ ပြောဆိုချက် ကို ကိုးကားသွားခဲ့တယ်။ MSF က ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေဟာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်စု ဆယ်မျိုးမှာ တစ်မျိုးအပါအ၀င် လို့ ရေးသား ထားတယ်။ ဒီလိုမျိုး MSF (AZG ရဲ့ မိခင်အဖွဲ့) က ကမ္ဘာသိ လိုက်လံ ပြောကြား နေတာဟာ မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို အားမနာလျှာမကျိုး လိုက်လံစွက်ဖက် နေတာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာကို ထိပါးနေတာ သာလျှင် ဖြစ်တယ်။
(၄) AZG ၀န်ထမ်းဟောင်း ဦးကျော်လှအောင်အပါအ၀င် မူဆလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီတွေက AZG ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လိုအပ်သလို ချယ်လှယ်နိုင်အောင် ခွင့်ပြု ထားတာဟာ မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်မဟုတ်။ တမင်သက်သက် လုပ်စေခြင်း ဖြစ်တယ်။ AZG ရဲ့ အရင်အမြစ်တွေကိုသုံး AZG ကားကို တစ်ဝီ၀ီ စီးပြီး စစ်တွေမှာ သွားလာ လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့ ဦးကျော်လှအောင်ကို ပမာနှိုင်းမယ်ဆိုရင်၊ ရ၀မ်ဒါ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီလှိုင်းကို တက်စီးခဲ့ကြတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ အလားတူ နိုင်ပါတယ်။
(၅) AZG ဟာ ဇွန်လ ဘင်္ဂါလီဆူပူမှုနဲ့ ဆက်စပ် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀န်ထမ်း ဦးကျော်လှအောင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အားကြိုးမန်တက်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ သူ လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ ကျပ်ငွေ (၄၉)သိန်း ခန့် ဆုချီးမြှင့်ပြီး အငြိမ်းစားပေးကာ ရန်ကုန်မှာထားရှိတယ်။ AZG အဖို့ရာ ဘင်္ဂါလီတိုက်ခိုက်ရေးသမားများဟာ ဆုချီမြှင့် ရမယ့် သူရဲကောင်း တွေဖြစ်တယ်။
(၆) ဒေါက်တာအေးမောင် ပြောသလို နိုင်ငံတကာက လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးချင်ရင် မြန်မာအစိုးရ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကတစ်ဆင့်ပေးပါ။ မှန်ပါတယ်။ ဒါ့တင်လား ဆိုတော့ ဒါနဲ့တင် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အသိုက်အ၀န်း က စောင့်ကြည့်ပြီး community watch လုပ်ရမယ်။ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ NGO တွေသာမက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုလည်း transparency ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရှိ အလုပ်လုပ်ခိုင်းရပါမယ်။
(၇) ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညံ့ဖျင်းပုံကို လျှောက်ပြောနေရင် အမုန်းပွားရုံပဲ ရှိမယ်။ စာရင်းကိုင်ဘယ်သူကို ရခိုင်ဝန်ကြီးဘယ်သူက ငွေစာရင်းလေး အဆင်ချောအောင် ရေးပေးဖို့ ပိုက်ဆံဘယ်နှစ်သိန်း မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တယ် ဆိုတာကအစ ကြားတဲ့လူက ကြားဖူးပြီးသား။ ဒီတော့ ထောက်ပံ့ကူညီရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ ကို ရပ်ရွာစောင့်ကြည့်သူတွေ အမြဲသိနေနိုင်အောင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (transparency) ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သဲချောင်းဘင်္ဂါလီစခန်း ဟာ အနုမြူ စက်ရုံတွေနဲ့ တကွ ဖြစ်သွားတာကို နေပြည်တော်ကို တာဝေးပစ် ဒုံးကျည်ထိမှ သိရတယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားကုန်နိုင်တယ်။
(၈) ရခိုင်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်တဲ့ ဆိုတဲ့ “ရှုခင်းသာ” ဆေးခန်းကို စစ်တွေမြို့ခံတွေ ကန့်ကွက်လို့ မဖွင့်လိုက်ရဘူး။ ဒါပေမဲ့ AZG က တောင်းဆိုလို့ ဆိုပြီး ဆောက်ပေးနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ အတွက် ဆေးခန်းနှစ်ခန်း ရှိသေးတယ်။ ဒီနေရာတွေ မှာ လည်း AZG ရဲ့ ပါဝင် ပတ်သက် နေမှုကို ဖယ်ရှားပစ်ရပါမယ်။
(၁၀) AZG ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အကြိမ်ကြိမ် ထိပါးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ ထိပါးတိုက်ခိုက်သူတွေကိုလည်း ပုံအော အကူအညီပေးခဲ့ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် AZG ကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ လုံးဝမထားပဲ ဖယ်ထုတ်ပစ်သင့်တယ်။ ဒီလိုဖယ်ထုတ်ရာမှာ AZG လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား တွေအတွက် လုပ်ပေးနေ တဲ့ အရောင်ပြစီမံကိန်း (alibi project) တွေကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း တွေ လက်လွှဲလုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်သင့်တယ်။
(၁၁) AZG ကို ဖယ်ရှားရုံမျှမက ရှေ့ကပြောခဲ့သလို AZG ရဲ့ foot-in-the-door နည်းစနစ်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ သူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာကို သိအောင် ဖော်ထုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေထဲက ဘယ်သူတွေ ရှိသလဲ။ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်တိုင်းမှူးရော ပါသေးလား၊ ရခိုင် ၀န်ကြီးချုပ်ကော ဘယ်လိုလဲ၊ ကျန်မာရေး ရခိုင်ပြည်နယ်မှူးလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီးလား။ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုမျိုး စိစစ်ပြီး AZG ရောဂါဝင်နေတဲ့ သစ္စာဖောက် ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်သင့်တယ်။
ဘင်္ဂါလီကုလားရွာတွေကလွဲလို့ ရွာနီးချုပ်စပ်က ရခိုင် ဗမာ တိုင်းရင်းသားရွာတွေကို ဆန်တစ်စိမှ မရောက်စေရအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြံဖန်ဆောင်ရွက်တာမျိုးအပြင်၊ ‘ကူညီထောက်ပံ့ရေး’ အားဖြင့် ပျက်စီးစေခဲ့တာ အများကြီးပါပဲ။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပျက်စီးစေခဲ့တယ်။
ဘင်္ဂါလီ တီဘီရောဂါသည်တွေကို AZG က နှစ်တွေ ဆယ်ချီပြီး ကုသပေးလာတာ ရောဂါသည် ဦးရေဟာ လျော့ကျမလာပဲ တိုးတိုးလာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ (တီဘီ ရောဂါရှိသူနဲ့မိသားစုကို ထောက်ပံ့တဲ့ ပမာဏက မက်ရောက်စရာ ဆိုတော့ ကုလားတွေ ကိုယ်တိုင် ရောဂါမကူး ကူးအောင်လုပ်နေကြတယ် လို့ဆိုတယ်။) ဒီလို တိုးလာတာကိုလည်း အကြောင်းရင်းမရှာပဲ ထောက်ပံ့တဲ့ အလှူရှင် ဆိုသူတွေက ဘာကြောင့်ထောက်ပံ့နေကြသလဲ။
ဘင်္ဂါလီတွေနေတဲ့ ကျေးရွာတွေကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ဆန်တွေ အလျှံပယ် ထောက်ပံ့နေလေတော့ ဆန်ဈေးကျတယ်။ ဒီတော့ ကုလားလယ်သမားတွေ နစ်နာတယ်။ လယ်စိုက်မယ့်အစား တီဘီရောဂါသည် ထောက်ပံ့ကြေးယူနေတာကမှ တွက်ချေကိုက်ဦးမယ် ဆိုတဲ့ တွက်ကြေးတွေဖြစ်လာတယ်။
လယ်သမားတွေ တောင်သူတွေအတွက် ပိုးသတ်ဆေးတွေကို အရမ်းကာရော စနစ်မရှိ ဖြန့်ဖြူးခဲ့တာတွေကြောင့် ဂေဟစနစ်တွေ ပျက်စီးကျန်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။
AZG ရဲ့ သရုပ်သကန် အမှန် ကို ဆန်းစစ် အံထုတ်ခြင်း (အပိုင်း နှစ်) ကို ဆက်ဖတ်ပါရန်။